Gary Neville Oo Saadaaliyay Kooxda Badin Doonta Chelsea Iyo Liverpool Kulanka Caawa Ee Stamford Bridge | Laacib.net
Gary Neville Oo Saadaaliyay Kooxda Badin Doonta Chelsea Iyo Liverpool Kulanka Caawa Ee Stamford Bridge
September 22, 2019 Balaleti 11
Gary Neville ayaa aaminsan in ku rafaadi doonto kulanka ay maanta la ciyaarayaan kooxda Liverpool, waxaana uu saadaaliyay in kooxda Jurgen Klopp ay guul ku gaari doonto Stamford Bridge.
Liverpool ayaa haatan hogaamineysa horyaalka Premier League iyagoo wada badiyay dhamaan shantii kulan ee ay ciyaareen ilaa iyo haatan xilli ciyaareedkan.
Dhanka kale Chelsea ayaa 5-2 kaga badisay Wolves Axadii la soo dhaafay, halyeeyga Manchester United Gary Neville ayaa aaminsan in kooxda Frank Lampard ay wajihi doonto guuldaradii labaad ee isku xigta maanta ka dib guuldaradii Valencia ka soo gaartay bartamihii isbuuca ee Champions League.
“Markii aan ka hadlayay rajada Champions League ee Liverpool xilli ciyaareedkii hore waan ku qaldanaa, ma aanan fileynin in Liverpool ay ilaa iyo dhamaadka u tartami karto labo gool, laakiin waan ku qaldanaa” ayuu Neville u sheegay Sky Sports.
“Waxaan weli aaminsanahay in Liverpool ay u baahan tahay inay ku guuleysato Premier League, gabi ahaanba waa muhiimad weyn inay sameeyaan. Gaar ahaan ciyaartoyda ay haatan heystaan.
“Ma garanayo koox iska celin karta seddexda afka hore, gabi ahaanba waa kuwa aad u fiican.
“Dhanka Chelsea marka aan ka hadlay, waa ay rafaadi doonaan, waxay u baahan yihiin inay goolal dhaliyaan.
“Aan aragno waxa dhaca, waa kulan xiiso leh laakiin waxaan qabaa in Liverpool ay badin doonto Axada.”
Chelsea ayaa caawa fiidkii waxa ay garoonka Stamford Bridge ku soo dhaweyn doontaa Liverpool iyagoo maanka ku haya inay ka aargutaan koobkii UEFA Super Cup ee ay ka qaadeen horaantii xilli ciyaareedkan.
Man United Oo Rigoore Uga Soo Baxday Rochdale, Chelsea Oo 7 Gool Ku Xasuuqday Grimsby Town Iyo Liverpool Oo Ka Soo Gudubtay MK Dons
"Farxada Mustaqbalka Ee Neymar Waxa Ay Taalaa......" - Dani Alves Oo Si Cad Saxaafada Ugu Sheegay Kooxda Ay Farxada Neymar Ku Xidhan Tahay.